Coolpad 7298D Firmware တင်နည်း ~
Easy Sharing Android
Coolpad 7298D Firmware တင်နည်း
8:27 PM by Unknown 30 comments
Coolpad Download Assistant နဲ့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Firmware နဲ့ Tool လေးကိုတော့ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ
ဒေါင်းလို့ရတဲ့ Coolpad Download Assistant ကို Install လုပ်လိုက်ပါ
ဒေါင်းထားတဲ့ Firmware လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံလို 100% ပြည့်တဲ့အထိ စောင့်ပါ
Vol Down.+Vol Plus + Power Key သုံးခုကိုပြိုင်တူနှိပ်လိုက်ပါ
အောက်ကလိုပုံလေးပေါ်လာရင်တော့ Firmware တင်တာအောင်မြင်ပါပြီ
Firmware --->>> Click Here To Download Firmware <<<
Tool --->>> Click Here To Download Tool <<<
Tagged: Coolpad , Firmwares
htun myat April 30, 2016 at 11:57 PM
Emc Prince May 4, 2016 at 12:10 AM
aung aung May 16, 2016 at 11:43 PM
ယူအက်ဘိကြိုါ်ထိုးထားရင်းနဲ့ Vol-+ voi+ + power နိပ်ရမှာလားခင်ဗျာ ရီကာဘရီမွတ် ထဲရောက်သွားလို့ပါ
zaw thant July 8, 2016 at 1:07 AM
အပေါ်ကနည်းအတိုင်းတင်တာ အဆင်မပြေပါ....သံဖြူဇရပ်မိုဘိုင်းက နည်းလေးကို အသုံးပြုပြီးရလာသော flash tool firmware လေးနဲ့ တင်လိုက်မှ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ဘော်ဘော်တို့ရေ...http://thanbyuzayatmobile.blogspot.com/2016/02/coolpad-mtk-device-cpb-firmware-flash.html
Thu rain March 29, 2017 at 11:29 AM
mgpyuelove mgpyuelove May 5, 2016 at 10:27 PM
kabyar chit May 8, 2016 at 5:00 PM
Kyaw Moe Htet May 15, 2016 at 9:33 AM
Thank par bro
စိုးမိုးသူ အောင် May 24, 2016 at 4:06 PM
zaw thant July 8, 2016 at 1:09 AM
Aung Myatkyaw May 24, 2016 at 7:13 PM
BONSAI PN June 30, 2016 at 9:16 AM
Alex ruata May 29, 2016 at 12:54 PM
‌နောက်‌ဆုံဆင့်‌ volum +,volum_ power တွဲဖိခါ recovery mode ‌ပေါလာတယ်‌ ဘယ်‌လိုဆက်‌လုပ်‌ရမယ်‌ ဆိုတာ ‌ပြော‌ပေးပါ အစ်‌ကို
zaw thant July 8, 2016 at 1:10 AM
9 power June 11, 2016 at 4:58 PM
Volum down နဲ့ အစဉ်ပြေပါတယ်
kyaw thi ha June 16, 2016 at 7:52 AM
Recovery modeပဲဝင်နေတယ် vol- နဲ့လည်းမရဘူးဗျာ
Ymn December 14, 2016 at 9:43 AM
Vol down နှိပ်ကြိုးထိုးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ
kyaw thi ha June 16, 2016 at 8:55 AM
ya ti August 8, 2016 at 5:28 PM
Volume + ဖိပြီး ကြိုးထိုးလိုက်ရင် သူ့ဘာသာသူ
Aung pyae August 23, 2016 at 8:15 PM
ဖုန်းနဲ့တင်လို့ရလား computer လိုသေးလား bro
ye htin84 September 12, 2016 at 6:59 PM
Nyein chan September 24, 2016 at 10:23 PM
Min Min July 4, 2018 at 5:00 PM
Unknown July 24, 2018 at 6:39 PM
Lwin Mg November 12, 2018 at 6:52 PM
Thank you.it ok vol+ only.
If you like, you should be say '' Thank ''
Mi A2 & A2 lite မြန်မာစာထည့်နည်း / Myanmar Font For Mi A2 & A2 Lite
ခုနောက်ထွက်တဲ့ Xiaomi Mi A2 & A2Lite မြန်မာစာ အခက်အခဲဖြစ်နေသူများအတွက် No.1 Bootloader unlock မလုပ်ရသေးလျှင် unlock ပြုလုပ်ပေးပါ ...
Redmi Note 1S CU 4G Dual Sim Firmware ရေးနည်း
Firmware ရေးရတာအဆင်မပြေတဲ့ဘဒိုတွေအတွက်ပါ ဒီနည်းလေးကတော့ System Update, Recovery Update, Fastboot Update ...
Coolpad Download Assistant နဲ့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Firmware နဲ့ Tool လေးကိုတော့ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ Coolpad Download Assis...
Myanmar Font For MI A1
TTA Mi A1 Font Helper ( 1 Click PC Tool) ================== Mi A1 ဖုန်းတွေအတွက် root မလိုပဲ မြန်မာဖောင့် 100% မှန်ကန်စေမယ့် tool လေးထွက...
Hol U10 Flashtool and Hol U19 4GB 8GB 16GB All In One Firmware
Honor ထဲက Hol U10 - Hol U19 တွေဖြစ်တဲ့ 4GB - 8GB - 16GBတွေကို ဒီFlashtool Firmware လေးနဲ့အကုန်တင်လို့ရပါတယ် LCD Error တက်နေရင်လဲ ...
Redmi Note 5A နဲ့ Redmi Note 5A PRIME အတွက် Mi account 100% ဖြုတ်နည်း
MI အတွက်ပါ redmi Note 5A နဲ့ Redmi Note 5A PRIME အတွက် Mi account 100% ပြူတ်ပါတယ် China To Global ROM လဲချိန်းလို့ရပါပြီ finger မပါရ...
OPPO R1001 FlashTool Firmware No Error
OPPO R1001 Flashtool firmware လေးပါ lcd error မရှိပါဘူး LCD error ဖြစ်နေရင်လဲ ဒီကောင်လေးနဲ့ရေးလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် စမ...
Miracle Box 2.27A Full Crack With Loader Download Free
Miracle Box Crack Latest Version 2.27a ကို crack ပြီး box မပါဘဲသုံးဖို့ပါ google မှာလဲရှာဒေါင်းလို့ရပါတယ် Link ပျက်နေတာတွေများလို့ ပြ...
Ooredoo Smart 10 (ZTE Blade L110) Firmware
Ooredoo ကနေရောင်းတဲ့ Smart9(ZTE T230) Firmware လေးပါ ကို HtetRkar ဆီကမလာတာလေးပါ :D Miracle Box နဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမဆုံ...
Mi Flash Unlock Tool v1.1.0317.1 English for unlocking Locked Bootloader
I present to you English version for the latest Mi Flash Unlock Tool v1.1.0317.1 (UPDATED 17th Mar '16) for Mi Max, M...
Copyright © Easy Sharing Android | Powered by Blogger